Budada Silicon Boride, SiB6 - Goodao Technology Co., Ltd.
Maaddaama qalabka P-nooca heerkulka sare ee heerkulka korantada lagu beddelo boroncarbide, waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo heerkulka ah, carbide shiidi kara. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay qalabka injineernimada qalabka dhoobada, nozzles-ka qarxa, soo saarista hareeraha gaaska iyo qeybaha kale ee shaashadda leh iyo shaabadaha.
Caanaha molecular B6si
Lambarka CAS 12008-29-6
Sifooyinka budo madow iyo cawl
Cufnaanta 3. 0g / cm3
Barta dhalaalida 2200 C
Isticmaala Maaddaama qalabka P-type-ka heerkulka sare ee qalabka heerkulka korontada lagu beddelo boapcarbide, loo isticmaali karo si ka duwan sida caadiga ah loo xoqdo, carbide shiidi kara. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida qalabka dhoobada injineernimada, qulqulaya qarxinta, soo saarista gaaska iyo qaybaha kale ee shaashadda leh iyo shaabadaha loo adeegsado diidmo
Silicon boride = 92. 95, cufnaanta 3.0 / cm3, barta dhalaalaya 2200, budada cawl glossyblack, laguma milmi karo biyaha, iska caabinta qiiqa, u adkeysiga thermalshock, iska caabinta daxalka kiimikada, gaar ahaan hoos u dhaca kuleylka kuleylka wuxuu leeyahay awood sare iyo xasilooni leh heer sare koronto, waxaa loo isticmaali karaa nooca p aaladda korantada korantada sare si loogu beddelo carbide boron, heer kulkeeduna heer kul yahay ayaa gaari karta 1200 C Waxaa loo isticmaali karaa injineernimada injineernimada, biiyaha ciida, soo saarista garbaha marawaxadaha gaaska iyo qaybo kale oo qaabaysan iyo shaabadood.
Aluminium borate (AlB2) waa nooc ka mid ah iskudhafka binary ee ay sameeyeen aluminium iyo boron. Waa casaan adag oo casaan ah heerkulka iyo cadaadiska caadiga ah. Waxay ku xasillan tahay aashitada milanka kuleylka ah, waxayna ku dhalataa aashitada hydrochloric kulul iyo nitric acid. Waa mid ka mid ah labada iskudhis ee aluminium iyo boron. Midda kale waa alb12, oo badanaa loo yaqaan aluminium borate. Alb12 waa muraayad madow oo monoclinic ah oo culeyskeedu gaarayo 2.55 (18 ℃).
Lagagama furfuri karo biyaha, aashitada iyo alkaliska. Waxay ku dhacdaa nitric acid kulul waxaana lagu helaa iyadoo la dhalaalinayo boron trioxide, baaruud iyo aluminium.
Qaab dhismeedka, atomyada B waxay sameysmayaan jajabyo garaaf ah oo leh atamka Al dhexdooda, oo aad ugu eg qaab dhismeedka magnesium diboride. Halbeegga kaliya ee 'AlB2' wuxuu muujinayaa tabinta biraha oo ay weheliso dhidibka isbarbar socda diyaaradda laba-geesoodka ah ee substrate-ka. Waxyaabaha isku dhafan ee boron aluminium waxaa lagu xoojiyaa fiyuuska boron ama fayraska boron leh daahan ilaaliya.
Qiyaasta mugga ee fiyuuska boron waa qiyaastii 45% ~ 55%. Culeys gaar ah oo hooseeya, sifooyin farsamo sare. Awoodda siligga dheer iyo qaabka istiraatiijiga ah ee isku dhafan ee aluminium ee boron aluminium ah waxay ku saabsan yihiin 1.2 ~ 1.7gpa iyo 200 ~ 240gpa, siday u kala horreeyaan.
Qaab-dhismeedka laastikada qaaska ah ee muddada-dheer iyo xoogga gaarka ahi wuxuu ku saabsan yahay 3 ~ 5 jeer iyo 3 ~ 4 jeer oo ah titanium daawaha duralumin iyo birta daawaha ah, siday u kala horreeyaan. Waxaa loo adeegsaday bacaha mashiinka mashiinka turbojet, gawaarida aerospace iyo dhismooyinka dayax gacmeedka. Habka isku xidhka baahinta cadaadiska kulul waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro taarikada, astaamaha iyo qaybaha leh qaabab isku dhafan, iyo habka loo shubay ee joogtada ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo saaro noocyo kala duwan.
Hore: Aluminium budada budada, AlB2
Xiga: Budada Magnesium Boride, MgB2
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Silicon boride boride'
Warshad budada loo yaqaan 'Silicon boride boride'
Soo saaraha budada Silicon boride
Soosaarayaasha budada Silicon boride
Qiimaha budada 'Silicon boride bor' Qiimaha